Trimedlure CAS 12002-53-8 Qiime, Badeecad ka timid Bolise
[CAS MAYA. ] 12002-53-8
[Foomka Molecular] C12H21ClO2
[Miisaanka Molecular] 232.746940
[Cufnaanta] 1.03g / cm3
Ku saabsan Trimedlure
Trimedlure [t-Butyl-2-methyl-4-chlorocyclohexanecarboxylate] - soojiidasho xoog leh oo loogu talo galay Badda Midhaha Mediterranean (Ceratitis capitata) ayaa loo isticmaalaa in lagu ogaado muuqaalka asalka ah ee cayayaanka halista ah. Trimedlure waxay bixisaa barnaamij kormeer ah oo lagu guuleysto iyadoo waqtiga saxda ah lagu buufiyo sunta cayayaanka. Naqshadeynta dabinka loo adeegsaday kormeerka noocyada cayayaanka noocyadiisa kala duwan waa Wing Trap, oo ah dabin kartoomada ka sameysan oo caag ah oo la tuuro loona yaqaan Pherecon IC Gunta hoose waa saxaarada dhejiska ah oo soo qabata cayayaanka iyo meesha ay tahay in sasabashada la dhigo. Qaab cusub oo cusub oo loogu talagalay xakameynta dhibaatada cayayaanka ayaa ah jahawareerka. Tani waxay ku lug leedahay in lagu dhergo aag leh pheromone-ka dheddigga sidaa darteed labku ma heli karo dheddigga uu la wadaago.